Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Magaalada Qoryooley. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Magaalada Qoryooley.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen sildhiga iyo difaacyada maleeshiyaatka dowlada Ridada iyo kuwa Kufaarta ay ka sameysteen gudaha degmada Qoryooley ee gobalka Shabeelada hoose.
Dagaalka ka dhacay degmada Qoryooley waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobalka Shabeelada.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa ugu dambeyntii la wareegay gacan ku heynta degmada Qoryooley,waxeyna dadka shacabka ee ku dhaqan degmadaaasi xaqiijiyeen in maleeshiyaatka dowlada Ridada khasaara lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
La wareegidda ciidamada Shabaabul Mujaahdiin ay la wareegeen degmada Qoryooley ayaa kusoo aadeysa xilli habeen hore ciidamada Mujaahdiiinta sidoo kale dagaal xoogan ay kula wareegeen gacan ku heynta degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho,iydoona ugu dambeyntii ciidamada Xarakada Alshabaab ay dib uga baxeen labadaasi degmo.